Fampianarana tsy misy fotony ! | NewsMada
Par Taratra sur 07/12/2016
Volavolaina hitam-birao ny zaza malagasy. Miharihary amin’ny tontolon’ny fampianarana eto Madagasikara io. Izay napetraky ny Frantsay ihany no nasiam-panovana sy navadibadika eo. Afaka bakalorea ny zaza malagasy iray, inona no hainy ? Vokatra manjavozavo sy manalasala. Na io teny malagasy nitaizan-dray sy reniny azy io aza, tsy voafehiny akory ny manoratra azy. Fampianarana tsy misy fotony !
Terena ankolaka na mivantana hanary ny tena hevitry ny atao hoe « asa », amin’ny alalan’io tontolon’ny fampianarana tsy misy fotony io ny taranaka malagasy. Teo amin’ny Malagasy, ny « mandeha miasa tany » no lazaina ho asa. « Handeha hiasa tany », io ny tena hevitry ny hoe « handeha hiasa », saingy efa nitsofoka ireo « karazan’asa » samy hafa ka zary nijanona hatreo amin’ny « handeha hiasa » sisa. Tsy misy vava asa nitsatohan’ny angady akory any amin’ny birao ka zary niforona tsy sazoka ny hoe « mpiasam-birao »…
Nomen-Janahary tanindrazana midadasika, mahavokatra, manan-karena ny Malagasy. Noho io tontolon’ny fampianarana (rafitra, fandaharam-pianarana, sns) tsy misy fotony io ny nanabeazana ny taranaka malagasy nanomboka tany amin’ny fanjanahantany ka hatramin’izao, tsy mahalala ny soa lehibe azo avy amin’ny tany intsony izy ireo. Heveriny fa ny mankany amin’ny birao no tena asa, hany ka hanjakazakan’ny vahiny ny tany.
Raha vao mianatra ny abidia ny zaza malagasy, beazina hahalala sy hitia ny momba ny taniny, azo antoka fa tsy hiala amin’izany izy. Hampianarina azy fa « matoa ny vahiny mibodo sy mitsiriritra ity tany ity », misy antony ao ! Mahavelona ny Malagasy ny taniny. Fototra tokony hanaingana ny tontolon’ny fampianarana eto Madagasikara io. Manana manam-pahaizana hanao izany ny Malagasy… Raha sanatria ka tsy vitan’ireo ny manova ny tontolon’ny fampianarana eto Madagasikara hanaraka ny « Mahavelona ny Malagasy ny taniny », mialà fa ianareo mihitsy no tsy misy fotony !